Mananosarotra ihany koa ny fahazoana findramam-bola, hoy ireo orinasa mivondrona anatin’ny sendika SEBTP. Manoloana izany indrindra dia nihaona niady hevitra omaly alakamisy 9 mey ireo banky sy ny SEBTP niara-nikaroka ny hametrahana rafitra hanamorana ny fiaraha-miasa teo ambany fanohanan’ny Vondrona Eoropeanina anatin’ny fandaharan’asa PROCOM. Tanjona ny hitady vahaolana hampandrosoana ireo orinasa misehatra amin’ny asa vaventy sy ny fanorenana miaraka amin’ireo banky mpamatsy vola ankehitriny. Tsy ny lalam-barotra mantsy no olana, hoy ireo orinasa ireo fa ny vola hoentina manantanteraka ireo asa ka ilana ny fampindramam-bola ataon’ny Banky. Amin’izao fotoana dia efa mahatratra hatrany amin’ny 20% mihitsy ny zanabola alain’ny Banky. Vitsy anefa ny orinasa mahavita tombombarotra mihoatra izany. Andrandraina tamin’izao fihaonana mbola hanamarihana ny andron’i Eoropa izao ny hahafahana mampihena ny zana-bola mba hitondra fampiroboroboana ireo orinasa ireo. Manoloana ny fisokafan’ny fiaraha-miasa amin’ny vondrona eoropeanina dia velom-bolo ireo mpisehatra amin’ny asa vaventy sy fanorenana ankehitriny ary manantena izy ireo fa hisy akony mivaingana amin’ireo seha-pihariana ataon’izy ireo izany.